Kitts & Nevis kwadoro ule Antigen maka ndị njem na -apụ apụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Saint Kitts na Nevis » Kitts & Nevis kwadoro ule Antigen maka ndị njem na -apụ apụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Kitts & Nevis kwadoro ule Antigen maka ndị njem na -apụ apụ.
Ụlọ nyocha akwadoro n'oge a bụ: Ụlọ nyocha Joseph N. France; Ọzọ Gen Laboratory; Avalon Laboratory na Quality Diagnostics.
A ga-enye ndị njem ikuku na-apụ apụ nke mba ha na-anabata nnwale ngwa ngwa akwadoro ma ha si ebe mba ofesi lọta ule Antigen.
Federation ewepụla ule ọpụpụ chọrọ maka ndị njem obodo ha na-achọghị nyocha nlọghachi.
A ga -eme nnwale ọpụpụ n'ụlọ nkwari akụ “Ndị njem nabatara” ma ọ bụ ebe obibi naanị site n'aka ndị ọkachamara ahụike ahụike kwadoro.
St. Kitts & Nevis kwuputara ụnyaahụ, Ọktoba 20, 2021, na a ga-enye ndị njem ikuku na-apụ apụ ule Antigen ule ngwa ngwa nke mba ha na-anabata nnwale ngwa ngwa akwadoro ma ha si na mba ụwa lọta. Federation ewepụla ule ọpụpụ chọrọ maka ndị njem obodo ha na-achọghị nyocha nlọghachi.
A ga -ewere nnwale ọpụpụ n'ụlọ nkwari akụ “Nkwado Njem” ma ọ bụ ebe obibi naanị site n'aka ndị ọrụ ahụike kwadoro ọkachamara ahụike 48 - 72 awa tupu ọpụpụ, na -anwale nlele na ụlọ nyocha mpaghara. Usoro nhazi nke ule ga-abụrịrị site na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ "Travel Approved" dị iche iche; A na-adụ ndị njem na-ebi n'ime Villas, Condo na/ma ọ bụ ụlọ nkeonwe ka ha kpọtụrụ hotline 19 ma ọ bụ [email protected] ka ha hazie ule ha. Biko mara na ule ndị a dị na ọnụ ahịa onye njem na ọnụ ahịa dị n'etiti USD 50.00 na USD 55.00.
Maka ịbanye na Federation of Kitts & Nevis, Protocol na ihe ndị chọrọ njem niile ka dị, gụnyere ntinye nke nsonaazụ ule na-adịghị mma site na ule RT PCR 72 awa tupu ọbịbịa.
A na -echetara ndị ọbịa ka ha na -enyocha St Kitts Tourism Authority na mgbe niile Ndị njem nlegharị anya Nevis weebụsaịtị maka mmelite na ozi.